राज्यले किनेको २४ लाख खोपको हिसाब छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
महामारीमा सरकारी उपहास
राज्यले किनेको २४ लाख खोपको हिसाब छैन
माघ ५, २०७८ अतुल मिश्र, स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — महामारीमा जीवनरक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्रराष्ट्रले अनुदानमा दिएकोमध्ये २४ लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्विकारेका छन् । तर यो बेथिति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा छानबिनसमेत भएको छैन ।
हालसम्म सरकारले खरिद गरेको १ करोड २० लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ, त्यस्तै अनुदानबाट २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज आएको छ । यसरी अहिलेसम्म ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप नेपाल आएको छ । मंगलबारसम्म २ करोड ८३ लाख २२ हजार आठ खोप लगाइएको सरकारी अभिलेख छ । यो हिसाबले अहिले भण्डारमा १ करोड २० लाख ६६ हजार ८ सय ३२ डोज खोप हुनुपर्ने हो । तर अहिले भण्डारमा करिब ८४ लाख मात्र छ । यसरी ३६ लाख ६६ हजार खोप अपुग छ ।
खोप लगाउँदा एकदेखि डेढ प्रतिशत खेर जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ छ । तर चार प्रतिशत खेर गएको मान्दा पनि १२ लाख मात्र कम हुनुपर्ने हो । त्योबाहेक २४ लाख ६६ हजार ८ सय ३२ मात्रा खोप नभेटिनु आश्चर्यजनक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ । एकातिर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्, पहिलो मात्राको खोप लगाउन पनि सर्वसाधारण दिनभरि भीडमा उभिन बाध्य छन् । अर्कोतिर पहुँचका आधारमा खोप लगाउने, त्यसको अभिलेख नराख्ने र कतिपय अवस्थामा खोप खरिदबिक्री भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
यी सबै टिप्पणीलाई थप बल दिँदै स्वास्थ्य सचिवले नै मंगलबार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भने, ‘अहिले समग्र अभिलेखमा २० देखि २४ लाख खोपको हिसाब देखिएको छैन । कतिपयलाई खोप लगाए पनि कार्ड वितरण नगरिँदा विवरण नमिलेको हुन सक्छ । अहिले तेस्रो डोज लगाउन आउने कतिपयले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउँदा कार्ड नै नपाएको पनि बताउने गरेका छन् ।’
यसअघि लगाइएका खोपको अभिलेख प्रणालीमा अद्यावधि नभएको देखिएको सरकारको भनाइ छ । ‘खोपको अभिलेख राख्नेदेखि लाइन मिलाउनेसम्मको काम एउटै निकायले गर्नुपर्दा पनि केही भद्रगोल देखिएको हो । हामीले केन्द्रबाट खोपको व्यवस्था गर्ने हो । स्थानीय तहमा त्यहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ संसदीय समितिमा डा. पोखरेलले भने ।
खोप वितरण तथा अभिलेख अद्यावधिमा भद्रगोल भएको विषयले सरकारको लापरबाही मात्र देखिएको छैन । नेपालजस्ता देशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खोप सहयोग गर्ने देशहरूलाई पनि सतर्क बनाउनेछ । त्यस्तै कति सर्वसाधारणले कुन चरणको खोप लगाए ? अब कतिलाई लगाउन बाँकी छ, अब कति आयात गर्ने भनेर योजना बनाउन स्वयं सरकारलाई पनि असहज हुनेछ । ‘अभिलेख दुरुस्त नभएमा आगामी दिनमा हामीलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ,’ स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने । अब तेस्रो मात्रा लगाउनेहरूको तथ्यांक भने व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रमका सुरुवाती दिनमा खोप खेर जाने दर १ प्रतिशत थियो । पछिल्लो समय धेरै स्थानमा खोप लगाउन थालेसँगै त्यो दर बढेकाले विवरण दुरुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा खोप दुरुपयोग नै भयो भन्न मिल्ने अवस्था देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘चीनले भेरोसेल खोप लगाएकालाई मात्रै प्रवेश दिने घोषणा गरेका बेला भारतीय विद्यार्थी र व्यापारीले पनि नेपालमा आएर खोप लगाए भन्ने सुनिएको थियो तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएन । अहिले त त्यो पनि छैन ।’ स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले संसदीय समितिमा ठूला सहरमा बसोबास गर्ने धेरैजसोले दुई मात्रा खोप लगाइसकेको दाबी गरे । ‘सहरी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशतले नै खोप लगाइसके भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । उनले प्राविधिक कठिनाइका कारण वडा–वडामा खोप पुर्‍याउन कठिन भइरहेको जानकारी दिए ।
पीसीआरको शुल्क घटाउने तयारी
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले पीसीआर परीक्षणको मूल्यमा केही दिनभित्रै समायोजन गरिने जानकारी दिएका छन् । समितिमा उपस्थित सांसदहरूले परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि उनले शुल्क समायोजन हुने बताएका हुन् । ‘हामी पीसीआरको मूल्य पुनः समायोजन गर्ने अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनमै हामी शुल्क घटाउँछौं ।’ सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेलाई निःशुल्क गर्ने पनि उनले बताए । अहिले सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर गर्दा एक हजार र निजीमा दुई हजार रुपैयाँ शुल्क छ । पीसीआरमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य घटे पनि निजी प्रयोगशालाले समायोजन गरेका छैनन् ।
‘माघ दोस्रो साता संक्रमण उत्कर्षमा’
नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर माघ दोस्रो साता उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ । माघ दोस्रो साताको मध्यतिर दिनमा संक्रमित हुनेको संख्या १९ हजारभन्दा बढी हुने आकलन मन्त्रालयले छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या बढ्ने प्रक्षेपण पेस गरे ।
डा. पौडेलका अनुसार त्यति बेला करिब १३ हजार व्यक्ति अस्पताल भर्ना हुने, एक हजारभन्दा बढीमा जटिल प्रकारको संक्रमण देखिने र त्यसमध्ये ३ सय ९४ जना गम्भीर हुने आकलन छ । ९ हजार ८ सय ४८ मा भने सामान्य लक्षण मात्रै देखिने प्रक्षेपण छ । डा. पौडेलले दोस्रो लहरमा जस्तो अक्सिजन अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरेको बताए ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०६:२५
खेसरीलाल नआउँदा बर्जु महोत्सवमा आगजनी र तोडफोड, आधा दर्जन सवारी साधनमा क्षति
माघ ४, २०७८ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाले आयोजना गरेको महोत्सवमा मंगलबार आगजनी र तोडफोड भएको छ । गत पुस २२ गतेदेखि संचालन भएको बर्जुमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरी जिल्ला प्रशासनले पुस २७ मा भिडभाडको कार्यक्रमहरुमा प्रतिबन्धसहितको आदेश जारी गरेको थियो ।
बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्रसमेत सहआयोजक रहेको महोत्सवमा आगजनीबाट नम्बर नखुलेको ४ वटा स्कारपियो, १ सिटीसफारी, एक मोटररसाइकल र १ साइकलमा आगजनी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । उच्छृङ्खल समूहले १ हजार वटा प्लास्टकको कुर्सी, स्टेज साउन्ड सिस्टम २ थान र २ वटा जेनेरेटरमा पनि पूर्ण क्षति पुर्‍याएको प्रजिअ यादवले बताए । गाउँपालिकाले प्रशासनको आदेशविपरीत महोत्सव जारी राखेको बेला मंगलबार गाउँपालिकाले भारतीय कलाकार नल्याएको भन्दै तोडफोड र आगजनी गरेको प्रजिअ यादवले बताए ।
आयोजक गाउँपालिका र बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्रले भारतीय भोजपुरी कलाकार खेसरीलाल यादव ल्याउने प्रचार गरेर ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँको टिकट बिक्री गरेको थियो । तर ती कलाकार नआएपछि सहभागीहरु आक्रोशित भएर आगजनी र तोडफोड गरेका प्रजिअ यादवले बताए । उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण बढेपछि मेला रोक्न भनेर पुस २ गते नै जिल्ला प्रशासनले पत्र दिएको थियो तर अटेर गरेर मेला चालु राखे । यो घटनाको जिम्मा गाउँपालिका र बर्जु विकास केन्द्रले लिनु पर्छ ।’
कोरोना महामारीको बेला बर्जु तालमा मेला लगाएर पैसा कमाउने धन्दा गर्दा घटना भएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय कलाकार खेसरीलाल आउन तयार भए पनि कोरोना महामारीका कारण आउन नदिने जानकारी आयोजक पक्षलाई अगाडि नै दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी संजयसिंह थापाले बताए । उनकाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीलाई मेला रोक्न बारम्बार चेतावनी दिँदा पनि अटेर गरेर महोत्सव निरन्तर गरेका थिए ।
आयोजकले भारतीय कलाकार खेसरीलाललाई लुकाएर विराटनगरसम्म ल्याएका थिए । उसका सहकलाकारहरु भने सोमबार नै आइसकेका थिए । यसबीचमा गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले आफूहरुले भारतीय कलाकार ल्याउने भनेर टिकट बिक्री गरिसकेको र कलाकारलाई पैसा समेत दिइसकेकाले मेला संचालन गर्न दिन अनेक पटक अनुरोध गर्दै अन्य विभिन्न नेतामार्फत भनसुन गराए । तर प्रहरी प्रशासनले नमानेपछि खेसरीलाल आउन सकेनन् । टिकट किनेर आएकाहरुले कलाकार नआएपछि हुलदंगा गर्दा उक्त घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
मेलामा करिब १० हजार दर्शक उपस्थित भएको बेला हुलदंगा भएपछि प्रहरीतर्फ पनि ईलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीको बा १ झ १४१२ नम्बरको स्कारपियो पिकअप गाडीमा क्षति हुनुका साथै २ जना प्रहरी पनि घाइते भएका थिए । एसपी थापाले अराजक भिड तितरबितर गर्न १५ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको बताए ।
मेलामा तोडफोड भएको विषयमा आयोजक गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ २२:१५
सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिएपछि बैठक स्थगित
सांसदले 'बंक' गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
भिक्षु संघद्वारा श्रीलंकालाई अत्यावश्यक औषधि सहयोग
यहाँ आँसु वर्जित छ
मैना धिताल असार २२, २०७९
हालै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा ‘इमोसनल’ भइन् । तर, उनी रोएको विषय सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियामा यसरी आयो कि मानौं उनले...
न्यायाधीश-वकिल घूस संवाद न्यायका लागि घातक
बलराम केसी असार २२, २०७९
न्यायपालिका विवादमुक्त हुन सकेन । एकपछि अर्को विवाद आउने क्रम जारी छ । २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालत आफैं विवादित बन्यो । २०७९ सालमा पनि सुरुमै न्यायाधीश–वकिलबीच थुनुवालाई छुटाउनेबारेको...
चुनावी गठबन्धनको गतिविज्ञान
जैनेन्द्र जीवन असार २२, २०७९
२०७४ सालको स्थानीय चुनावको तुलनामा हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव हेर्दा चुनावी गठबन्धनबाट सबभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रलाई भएको स्पष्टै छ । पूर्वानुमानभन्दा धेरै अर्थात् १२१ पालिका...